June 9, 2021 - ApannPyay Media
သံလွင်ဆီကို အသုံးပြုပြီး တောက်ပတဲ့ Glow Skin ဖြစ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ
June 9, 2021 by ApannPyay Media
သံလွင်ဆီကို အသုံးပြုပြီး တောက်ပတဲ့ Glow Skin ဖြစ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ သံလွင်ဆီဟာ အလှအပအတွက် သာမက ကျန်းမာရေး အတွက်ပါ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ ဆေးကောင်း တစ်လက် ဖြစ်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီ ဟာဆိုရင် အသားအရေကို စိုပြည် လှပစေပြီး အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်တွေကို အသစ်အသစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေ နိုင်တာကြောင့် အသားအရေကို အထူး လှပစေပါတယ်။ ခု ဖော်ပြပေးမှာ ကတော့ သံလွင်ဆီကို သုံးပြီး အသားအရေကို ကြည်လင် တောက်ပစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ( ၁ ) သံလွင်ဆီနဲ့ သံပုယိုရည် သံလွင်ဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ သံပုယိုရည်၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းတို့ကို သမအောင် … Read more
သင့်မွေးဂဏန်းက ပြောသော သင့်အကြောင်း
သင့်မွေးဂဏန်းက ပြောသော သင့်အကြောင်း ၁ မှ ၉ အထိ ရှိပါသည်။ အတွဲဂဏန်းများ ဆိုလျှင် တစ်လုံးထဲဖြစ်အောင် ပေါင်းပါ။ ဥပမာ ၁၇ ဆိုလျှင် ၁+ ၇ = ၈ ဂဏန်းသမားဖြစ်သည်။ ဂဏန်းသချင်္ာဗေဒင်သည် အနောက်တိုင်းနည်းကို အခြေခံထားသဖြင့် မြန်မာ ရက် ၊လ၊ နှစ် မွေးရက်များကို မယူပဲ ခရစ် ရက် လ နှစ်ကို တည်လျှက် ဟောကိန်းထုတ်ယူရပါသည်။ ဂဏန်းအားဖြင့် ၁ မှ ၉ အထိ ဂဏန်းတစ်လုံးချင်း၏ရာထူးဂုဏ် ၊ ဝိသေသနနှင့် အမူအကျင့် များသည် မတူညီကြပါ။ ကိန်းဂဏန်းတို့သည် ဂြိုဟ်တို့ကို ကိုယ်စားပြုကြသည် ဖြစ်သည်။ ၁ ဂဏန်း ဂဏန်းအားလုံးတို့တွင် နေမင်းကို ကိုယ်စားပြုသော … Read more
သရဲထက်ဆိုးဝါးတဲ့ DEMONIC FORCE လို့ခေါ်တဲ့ DEMON အတိုက်ခံရတဲ့ အချိန်ကာလ
သရဲထက်ဆိုးဝါးတဲ့ DEMONIC FORCE လို့ခေါ်တဲ့ DEMON အတိုက်ခံရတဲ့ အချိန်ကာလ သရဲထက်ဆိုးဝါးတဲ့ Demonic Force လို့ခေါ်တဲ့ Demon အတိုက်ခံရတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုရှိဘူးတယ် မနှစ်က ဟိုတယ်တွေပတ်နေတုန်းက ဖြစ်တာ ၊ ရန်ကုန်က ဟိုတယ်ပါပဲ။ ထူးထူးဆန်းဆန်း နာမည်တပ်မပြောတော့ဘူး ရေကျော်နားက ဟိုတယ်ပဲ။ အစက ရှစ်မိုင်က ဟိုတယ်တစ်ခုမှာနေရင်းနဲ့ ဟိုတယ်မန်နေဂျာနဲ့ အဆင်မပြေလို့ ရေကျော်က ဟိုတယ်တစ်ခုကိုသွားခဲ့တာ အဲ့ ဟိုတယ်မှာ ပထမဆုံး စငှားတယ်။ အဲ့ ဟိုတယ်မှာနေရင်း သရဲခြောက်ခံရတာတော့ မပြောတော့ဘူး ။ သရဲက သိပ်ပီး ကြောက်စရာမကောင်းလို့ ကြောက်စရာကောင်းတာက ပထမဆုံး အဲ့ ဟိုတယ်က ညပဲ။ ပစ္စည်းတွေကိုထားပြီးတော့ အပြင်ထွက် ည2နာရီလောက်မှ ပြန်ရောက်တာ ပြန်လည်းရောက်ရော … Read more
ပလတ်စတစ်အစားထိုးဖို့ ဝါးရေဘူးကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ၊ အာသံ ပြည်နယ်က IIT Dhanbad ကျောင်းဆင်း တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ စွန့်ဦးတီထွင် သူ Dhritiman Bora က ပလတ်စတစ် အစားထိုး အသုံးပြုဖို့ အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးပြု ဝါးရေဘူး ကို စတင် တီထွင် ခဲ့တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ သူ တီထွင် ခဲ့တဲ့ ဝါး ရေဘူး အမျိုးအစားကို ဝါးစစ်စစ် နဲ့ သာ ပြု လုပ် ထား တာ ဖြစ် ပြီး သဘာဝ ဝါးရေဘူးအစစ်သာ ဖြစ် တယ် လို့ သိ … Read more
ခြေဗလာလမ်းလျှောက်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးများ ကျောက်စရစ် ခဲလုံးလေးတွေပေါ် ဖိနပ်မပါဘဲ လမ်းလျှောက်နေတာကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ မြေပြန့်ပေါ်မလျှောက်ဘဲ ဘာ့ကြောင့် တကူးတက ခဲလုံး ပေါ် လမ်းလျှောက်ကြရတာလဲ? ဖိနပ်ချွတ်ပြီး ဘာ့ကြောင့် ခက်ခက်ခဲခဲ လမ်းလျှောက်ကြရတာလဲ? ( ၁ ) သွေးကျစေပါတယ် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ သွေးတိုးရောဂါရှိသူ သက်ကြီး ရွယ်အိုများကို ရက်သတ္တတစ်ပတ်လျှင် သုံးနာရီဖြင့် အချိန် ကာလလေးလကြာမျှ ကျောက်စရစ်ခဲတွေပေါ် ခြေဗလာဖြင့် လမ်းလျှောက်စေခဲ့ရာ သိသိသာသာ သွေးတိုးကျသွားပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါသည်များ အဲဒီလို လျှောက်ပေးခြင်းက မြေပြင်ညီပေါ်ဖိနပ်စီး၍ ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ခြင်းထက် ပိုမိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေတယ်လို့ ၂ဝဝ၅ခုနှစ်ထုတ် The American Geriatrics Society (ခေါ်)အမေရိကန် သက်ကြီးရွယ်အိုလူ့ဘောင်အဖွဲ့လို့ အမည်ရတဲ့ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ( ၂ ) အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းလာစေပါတယ် အာရုံစူးစိုက်ပြီး ခြေလှမ်းတိုင်းကို … Read more
ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါ စျေးနှုန်းကြည့်စရာမလိုဘဲ စျေးဝယ်နိုင်တဲိ့
ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါ စျေးနှုန်းကြည့်စရာမလိုဘဲ စျေးဝယ်နိုင်တဲိ့ သင့်ငယ်စဉ်ခလေး ဘဝပညာသင် ချိန်တုန်းက အတန်ထဲမှ စာညံသူ အဖြစ် အားလုံ းပျက်ရယ်ပြုတာကို အခုသင့် အသက်အရွယ် တစ်ခုရောက်လာတဲ့ အချိန်မှ သင့်ဟာ စီးပွားရေးကောင်းမွန် စွာ နားလည်းပီး အောင်မြင်နေသူ တစ်ယောက်ဖြစ် ကြောင့်ကို ပြနိုင်အောင် ကြိုးစားပြ လိုက်စမ်း ပါ။ သင့်ကို အထင်သေးတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်တာကို အထင်ကြီးတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ ့ပြန်ကြည့်ကျအောင် ကြိုးစားပြ လိုက်စမ် းပါ။ သင့်ကို အားလုံးက ပျော့ညံ့သူ တစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်ချင် ခံရတာကို သင့်ဘယ်လောက်ထိ သန်မာခိုင်မာကြောင့် ကို ပြနိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက် စမ်းပါ ။ သင့်ချစ်သူက သင့်ဆငိးရဲ့နေချိန်မှ သင့်ကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့ ချစ်သူကို သင့်အခုပိုက်ဆံတွေ သုံးလို့မကုနိကြောင့်ကို ပြနိုင်အောင် … Read more
ကျောရိုးတစစ်စစ်ကိုက်ခြင်း ခါးရိုးနာခြင်း တို့အတွက် ရှားစောင်းလက်ဆက် ဆောင်းရောက်ပြီဆိုသည်နှင့်နောက်ကျောရိုးများတဆစ်ဆစ်ကိုက်တော့သည်။ကိုယ်ခန္ဓာဝသော်လည်းကျောရိုးကိုက်သောဒဏ်ကြောင့် အအိပ်အစားပျက်ကာပိန်၍ပင် ကျသွားတော့သည်။အေးလာလေ ပို၍ကိုက်သည်မို့ ဆောင်းရောက်မည်ကိုကြောက်တော့သည်။ကျောရိုးတွေကိုက်ကြောင်း မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးဆရာတစ်ဦးအားပြောပြခဲ့ရာ ~~မောင်ရင်ကို နည်းလေးတစ်ခုပေးမယ်ဆိုကာရှားစောင်းလက်ဆက်ကို အပြားဖြစ်အောင်ရိုက်ပြီးကျောပြင်တွင် အဝတ်ဖြင့် စည်းကာတစ်ပတ်တိတိကပ်၍နေစေပါသည်။ညအိပ်လည်းစည်းပြီး အိပ်စေပါသည်။အမှန်ပင် ကျောရိုးကိုက်ခြင်းအရှင်းပျောက်ကင်းခဲ့ပါသည်။ ရှားစောင်းလက်ဆက် – တစ်ဆစ်တစ်ဆစ်အကွာအဝေး (4/5)လက်မရှိသည်။လေးမြှောင့်ပုံရှိသည်။အဆစ်တွင် အရွက်အပွင့်အသီး တို့ရှိသည်။အပွင့်အရောင်သုံးမျိုးရှိသည်။နှင်းဆီ ကြက်သွန်နီခွံရောင် အဖြူရောင်တို့ဖြစ်သည်။ အသီးမှာစားတော်ပဲခန့်ရှိသည်။ဂုဏ်နှင့်စွမ်းရည် – လေသလိပ်ကိုနိုင်သည်။အရိုးကျိုးကဆက်စေသည်။မျက်စိရောဂါကိုအကျိုးပြုသည်။ကာမအားကိုတိုးစေသည်။အရိုးကျိုး မီညှောက်ရိုးကိုက်ခြင်း မွတ်သိပ်စာလောင်ခြင်းကိုပျောက်စေသည်။နားကိုက်ပါက အဆစ်မှညှစ်ရည်နှစ်စက်လောက်ချပေးပါကနားနာနားကိုက်ပျောက်သည်။အခြားသောပျောက်ကင်းစေသော ရောဂါများလည်းရှိပါသည်။ Credit – ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်) ေက်ာ႐ိုးတစစ္စစ္ကိုက္ျခင္း ခါး႐ိုးနာျခင္း တို႔အတြက္ ရွားေစာင္းလက္ဆက္ ေဆာင္းေရာက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ေနာက္ေက်ာရိုးမ်ားတဆစ္ဆစ္ကိုက္ေတာ့သည္။ကိုယ္ခႏၶာဝေသာ္လည္းေက်ာရိုးကိုက္ေသာဒဏ္ေၾကာင့္ အအိပ္အစားပ်က္ကာပိန္၍ပင္ က်သြားေတာ့သည္။ေအးလာေလ ပို၍ကိုက္သည္မို႔ ေဆာင္းေရာက္မည္ကိုေၾကာက္ေတာ့သည္။ေက်ာရိုးေတြကိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာတိုင္းရင္းေဆးဆရာတစ္ဦးအားေျပာျပခဲ့ရာ ~~ေမာင္ရင္ကို နည္းေလးတစ္ခုေပးမယ္ဆိုကာရွားေစာင္းလက္ဆက္ကို အျပားျဖစ္ေအာင္ရိုက္ၿပီးေက်ာျပင္တြင္ အဝတ္ျဖင့္ စည္းကာတစ္ပတ္တိတိကပ္၍ေနေစပါသည္။ညအိပ္လည္းစည္းၿပီး အိပ္ေစပါသည္။အမွန္ပင္ ေက်ာရိုးကိုက္ျခင္းအရွင္းေပ်ာက္ကင္းခဲ့ပါသည္။ ရွားေစာင္းလက္ဆက္ – တစ္ဆစ္တစ္ဆစ္အကြာအေဝး (4/5)လက္မရွိသည္။ေလးေျမႇာင့္ပုံရွိသည္။အဆစ္တြင္ အရြက္အပြင့္အသီး တို႔ရွိသည္။အပြင့္အေရာင္သုံးမ်ိဳးရွိသည္။ႏွင္းဆီ … Read more
ဆီးချိုရောဂါအတွက် ကြက်သံပုရာပေါင်း ဆေးနည်း
ဆီးချိုရောဂါအတွက် ကြက်သံပုရာပေါင်း ဆေးနည်း ဆေးနည်း – ကြက်သား ၁၀ ကျပ်သားကို ဆားနဲ့ နနွင်း နယ်ပြီး ( ကျန်တာ ဘာဆို ဘာမျှ မထည့်ရ) သံပုရာ သီး စစ်စစ် တလုံး( မခွဲမစိပ်ပဲ သဘာဝ အလုံးအတိုင်း ) နဲ့အတူ ရောပြီး ပေါင်းရပါမယ်။ အကယ်၍ ကြက်သား ကို ၂၀ ကျပ် သားဆိုရင် သံပုရာသီးက ၂ လုံး ဖြစ်ပါမယ်။ပေါင်းပြီးသား ကြက်သားနဲ့ ပေါင်းရည်ကို သောက်ခြင်းဖြင့် ဆီးချိုအမှတ် တက်မှုဟာ သိသိသာသာ ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရသာကတော့ နည်းနည်း ခါးသက်သက်နေပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာ အထူး သတိပြုစရာတခုကတော့ ကြက်သံပုရာပေါင်းရည်ကို သောက်လို့ ဆီးချိုအမှတ်ကျ လာ မှာဖြစ်ပေမယ့် ဆီးချို … Read more
ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ ရှားစောင်းလက်ပက် ပင်လေးတွေစိုက်ပျိူးနည်း
ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ ရှားစောင်းလက်ပက် ပင်လေးတွေစိုက်ပျိူးနည်း ရှားစောင်းလက်ပက်ဆိုတာကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက်ရော အလှအပအတွက်ပါ အသုံးဝင်ရုံမက အိမ်မှာစိုက်ပျိုး ထားရင်လည်း မျက်စိပသာဒ အေးပါတယ်။ရှားစောင်းလက်ပက်မှာ Antioxidant (ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း) တွေပါ ဝင်လို့ အရွယ်တင်နုပျိုစေသလို ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေလို့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေ ဝင်ရောက်ခြင်း က နေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဝက်ခြံ၊ အသားအရေခြောက်တာ စတဲ့ အရေပြားဆိုင်ရ ပြဿနာတွေအ တွက် လည်း ကောင်းမွန်တာမို့ အလှအပကြိုက်သူတို့ရဲ့ အဖော်မွန်ပါပဲ။ ပျိုးပင်စိုက်မယ် – ရှားစောင်းလက်ပက်ပျိုးပင်ကို သဲ၊ အုန်နီခဲအကျိုး၊ မီးသွေး စတာတွေကို မြေကြီးထဲမှာ အနည်း ငယ် ရောပြီး စိုက်ပျိုးပေးပါ။ (သစ်ဆွေးတွေတော့ မပါပါစေနဲ့၊ အမြစ်တွေကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။)နွေရာသီအတွင်းမှာလည်း ရေမကြာခဏလောင်းပေးစရာမလိုပါဘူး။ ညဖက်တွေမှာကျတဲ့ဆီးနှင်းတွေကို အရွက်တွေက သိုလှောင်ထားနိုင်လို့ ပါ။ ရှားစောင်းလက်ပက်ကို အပူချိန်နိမ့်တဲ့နေရာမှာစိုက်ပျိုးသင့်ပါတယ်။ စြင်္က ံမှာ … Read more